“Waxaan codsaday inaan baxo… waxayna iga dhigeen tuug” – Mbappé - Barwaaqo TV - Warbaahinta Bulshada Horumarkeeda
“Waxaan codsaday inaan baxo… waxayna iga dhigeen tuug” – Mbappé
By admin October 4, 2021 43
(Paris) 04 Okt 2021. Weeraryahanka Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappé ayaa markii ugu horeysay ku dhawaaqay rabitaankiisa ah inuu ka tago kooxda reer France, intii lagu jiray suuqii xagaaga ee lasoo dhaafay.
Kylian Mbappé ayaa u sheegay RMC:
“Waxaan codsaday inaan baxo, sababtoo ah laga bilaabo waqtigii aanan rabin inaan cusbooneysiiyo qandaraaska, waxaan doonayay in kooxda ay ka faa’ideysato dhaqaale ahaan iibkeyga, si ay u keento bedel wanaagsan.”
“Paris wax badan ayay i siisay, mar walbana waan ku farxay 4-tii sano ee aan halkaan ku qaatay, walina waxaan qeyb ka ahay safkooda.”
“Dadku waxay sheegeen inaan diiday 6 ama 7 dalab oo ah inaan qandaraaskeyga kordhiyo, isla markaana iaan dooneynin inaan mar dambe la hadlo Leonardo, taas oo aan run ahayn haba yaraatee.”
“Waxay ii sheegeen in hadda wixii ka dambeeya aan la hadli doono madaxweynaha kooxda, Nasser Al-Khelaifi, mana garanayo inay taasi la micno tahay in Leonardo uusan xal ila gaarin.”
“Shaqsi ahaan, ma jeclayn in la dhaho (wuxuu codsanayaa inuu baxo toddobaadkii ugu dambeeyay ee August) si aan ugu ekaado tuug, sababtoo ah waxaan sheegay dhammaadkii bishii July inaan doonayo inaan baxo.”
Yeelkeeda, qandaraaska ciyaaryahanka ee kooxda PSG ayaa dhacaya dhammaadka xilli ciyaareedkaan, Real Madrid ayaana raacdo u gashay saxiixiisa saacadaha ugu dambeeya ee suuqa kala iibsiga xagaaga, laakiin heshiiska ayaa burburay sababo la xiriira madax adeega madaxda kooxda Paris.
Ethiopian PM begins 2nd term saying war exacts ‘heavy price’ – Associated Press
Dowlad Goboleedka Hirshabeelle oo soo gabagabeysay doorashada xubnaha Aqalka Sare ku matalayo